Yintoni IBhabhiloni Enkulu? | Imibuzo YeBhayibhile
IBhabhiloni Enkulu, echazwe kwincwadi yeSityhilelo, yingqokelela yonqulo lobuxoki lwehlabathi ayithiyileyo uThixo. * (ISityhilelo 14:8; 17:5; 18:21) Nakubeni ingafani indlela eyenza ngayo kwizinto ezininzi, iyonke ibabhekelisela kude abantu ekunquleni uThixo oyinyaniso, uYehova.—Duteronomi 4:35.
Iindlela Zokubona IBhabhiloni Enkulu
Igama elithi iBhabhiloni Enkulu liyafuzisela. IBhayibhile iyichaza ‘njengomfazi nehenyukazi elikhulu’ elinegama ‘eliyimfihlelo: “IBhabhiloni Enkulu.”’ (ISityhilelo 17:1, 3, 5) Incwadi yeSityhilelo ‘inemiqondiso,’ ngenxa yoko kusengqiqweni ukufikelela kwisigqibo sokuba igama elithi iBhabhiloni Enkulu liyafuzisela, ayingomfazi wokoqobo. (ISityhilelo 1:1) Ukongezelela, ‘lihleli phezu kwamanzi amaninzi,’ amela “izizwana nezihlwele neentlanga neelwimi.” (ISityhilelo 17:1, 15) Umfazi wokoqobo akanakuyenza loo nto.
IBhabhiloni Enkulu imela intlangano esehlabathini. Ibizwa ngokuba ‘sisixeko esikhulu esinobukumkani phezu kookumkani bomhlaba.’ (ISityhilelo 17:18) Ngenxa yoko, isehlabathini lonke yaye inempembelelo.
IBhabhiloni Enkulu yintlangano yonqulo, kungekhona eyezopolitiko okanye ezorhwebo. IBhabhiloni yamandulo yayisisixeko esidume ngonqulo, isaziwa ngokusebenzisa ‘oomabophe nokukhafula.’ (Isaya 47:1, 12, 13; Yeremiya 50:1, 2, 38) Phofu kwakuqheliselwa unqulo lobuxoki oluchaseneyo noThixo oyinyaniso, uYehova. (Genesis 10:8, 9; 11:2-4, 8) Abalawuli baseBhabhiloni, benekratshi bamphakamela uYehova nonqulo lwakhe. (Isaya 14:4, 13, 14; Daniyeli 5:2-4, 23) Ngokufanayo, iBhabhiloni Enkulu yaziwa ‘ngokuqhelisela ukusebenzelana nemimoya.’ Loo nto ibonisa ukuba iyintlangano yonqulo.—ISityhilelo 18:23.
IBhabhiloni Enkulu ayinakuba yintlangano yezopolitiko kuba “ookumkani bomhlaba” bazilela ukutshatyalaliswa kwayo. (ISityhilelo 17:1, 2; 18:9) Ayiyo nentlangano yezorhwebo kuba iBhayibhile iyayahlula ‘kubarhwebi abahambahambayo bomhlaba.’—ISityhilelo 18:11, 15.
UStela kaKumkani uNabhonidas waseBhabhiloni kunye nemifanekiso yoothixo abanjengoSin, uIshtar noShamash
IBhabhiloni Enkulu ilunqulo lobuxoki. Kunokuba lufundise abantu indlela yokusondela kuThixo oyinyaniso, uYehova, unqulo lobuxoki lubakhuthaza ukuba banqule abanye oothixo. IBhayibhile ikubiza oku ngokuba ‘ziintlobano zokuziphatha okubi.’ (Levitikus 20:6; Eksodus 34:15, 16) Iinkolelo ezinjengoThixo Oneziqu Ezithathu, ukungafi komphefumlo nokunqulwa kwemifanekiso kwakusenziwa kwiBhabhiloni yamandulo ibe kusaqhutyekwa nako nakunqulo lobuxoki. Olu nqulo lobuxoki ludibanisa unqulo lwawo nokuthanda ihlabathi. Xa ithetha ngolu hlobo lokunganyaniseki, iBhayibhile ithi, kukukrexeza.—Yakobi 4:4.
Ubutyebi bonqulo lobuxoki nokuqhayisa ngabo kufana nomfanekiso-ngqondweni esiwuzotyelwa yiBhayibhile ngeBhabhiloni Enkulu, ‘ivathiswe ngezimfusa nezingqombela’ ibe ‘ihonjiswe ngegolide nelitye elixabisekileyo neeperile.’ (ISityhilelo 17:4) IBhabhiloni Enkulu ngumthombo ‘wezinto ezilizothe zomhlaba’ okanye iimfundiso nezenzo ezingamkholisiyo uThixo. (ISityhilelo 17:5) Amalungu onqulo lobuxoki ‘zizizwana nezihlwele neentlanga neelwimi’ ezixhasa iBhabhiloni Enkulu.—ISityhilelo 17:15.
IBhabhiloni Enkulu ibekek’ ityala ngokufa kwabo “bonke abaye babulawa ngogonyamelo emhlabeni.” (ISityhilelo 18:24) Ukutyhubela imbali, unqulo lobuxoki alukhange nje luxhokonxe imfazwe nobugrogrisi kodwa luye lwasilela nokufundisa abantu inyaniso ngoYehova, uThixo oluthando. (1 Yohane 4:8) Oku kusilela kuye kwanegalelo ekuphalaleni kwegazi labantu abaninzi. Abo bafuna ukukholisa uThixo bafanele ‘baphume kuyo,’ bazahlule kunqulo loboxoki.—ISityhilelo 18:4; 2 Korinte 6:14-17.
^ isiqe. 3 Funda inqaku elithi, “Ndinokulufumana Njani Unqulo Lokwenyaniso?”